Deeqo Dheeraad ah Duufaanta Duufaanta Duufaanta Kuleylka - Dakhliga Guud
Iyadoo loo eegayo Taageerada Dawlada ee Qorshaha Cabbirka, waxaad xaq u yeelan kartaa gaasDeeqda Boostada ee ilaa £ 1,000!
Haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah kuwan ka mid ah golahaa oo aad kasbato wax ka yar £ 35k ama aad qaadatid manfacyada, waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelato mid ka mid ah deeqaha gaasta ee gaasta. U qalmitaanka deeqda waxay ku saleysan tahay dakhliga reerkaaga waxayna waxoogaa ka duwan tahay golaha degmada. Haddii dakhliga qoyskaaga uu ka hooseeyo £ 35k, waxaad xaq u yeelan kartaa, markaa fadlan naga soo wac ama buuxi foomka dhinaca midigta waanan ku xaqiijin karnaa haddii aad awoodid inaad hesho deeqda.
Devon - West Devon, South Hams (dadka dakhliga guriga ka hooseeya £ 35,000)
Devon - Mid Devon, Torridge iyo Plymouth (dadka dakhliga qoyska ka hooseeya £ 30,000)
Devon - Teignbridge iyo Exeter (heerarka dakhliga waxay ku xiran yihiin inta carruur ah ee aad haysato - fadlan wac)
Cornwall - Waqtiga hadda waa in aad qaadato waxtarka faa'iidooyinka - fadlan tag halkan si aad u aragto haddii aad xaq u leedahay
Surrey - Runnymede iyo Spelthorne (dadka dakhliga qoyska ka hooseeya £ 35,000)
Berkshire - Bracknell Forest (dadka dakhliga guriga ka hooseeya £ 35,000)
Dorset - dhammaan meelaha - (heerka dakhliga waa kala duwan yahay iyadoo ku xiran inta ilmo aad haysato - fadlan wac)
Wiltshire - dhammaan meelaha - (heerka dakhliga waa kala duwan yahay iyadoo ku xiran inta ilmo aad haysato - fadlan wac)
Somerset -South Somerset iyo Mendip - (heerka dakhliga waa kala duwan yahay iyadoo ku xiran inta carruur ah ee aad haysatid - fadlan wac)
Waa maxay deeqda la ii heli karo?
Lacagta soo socota waxay diyaar u tahay dib u habeynta gaasigaaga ee maadada iyo munaasabada:
Guryo mug leh ama bungalow iyo guryaha beerta £ 1000
Guryaha ku yaalla ama dhamaadka guryaha bannaan ama bungalows £ 750
Guryaha, maisonettes, guryaha u dhaxeeya barxadaha iyo bungalows iyo guryaha kale £ 500
Intee ayey shaqadu qiimeyneysaa?
Kharashka korriinka gaaskiilahaagu wuu kala duwanaan doonaa iyada oo hadba ku xiran hadba sida loo shaqeeyo, laakiin sida caadiga ah waa in la cusbooneysiiyo khadka Baaskiilka Worcester Bosch, si loogu daro nidaamka nadiifinta iyo koontaroolada cusub waxay u dhexeysaa £ 2-3,000 yaraanta deeqda. Qaybo ka mid ah Devon, golayaasha qaarkood waxay bixiyaan deymo dulsaar hooseeya oo sidoo kale loo isticmaali karo in lagu caawiyo maalgalinta macaamiisha.
Sidee baan ku helaa deeqda qashin qubka gaasta? Wac 0800 0 246 234 Haatan!
Adiga, kiraystahaaga, ama qof gurigaaga ku nool wuxuu u baahan yahay dakhliga ka hooseeya marxalad gaar ah
Waxaad tahay milkiilaha guriga ama kireyste gaar ah (guryaha guryaha bulshada xaq uma laha)
Haddii aad aaminsan tahay inaad xaq u leedahay, waxaad dalban kartaa codsigaaga adoo helaya qofka qaata faa'iidooyinka si loo buuxiyo foomka jeegga u-qalmitaanka internet-ka ee ku yaal dhinaca midig
* ku xiran sahan, maaliyado kooban, shuruudaha iyo xaaladaha.